Lifepo4 Ibhetri, Lithium Ibhetri, Solar Ibhetri-Lithtech
Inkqubo yamandla ombane
I-RV / Marine / iinqwelo zeGalufa / i-EV / AGV
Isantya esisezantsi se-EV / inqwelo yegalufa / imoto yokucoca / iRV
I-Shenzhen Lithtech Energy Co, Ltd.
I-Shenzhen Lithtech Energy Co, Ltd.yishishini eliphambili kwezobuchwephesha, elikhethekileyo kwi-R & D, imveliso kunye nentengiso yeemveliso zebhetri yeLithium egcwalisekayo. Zeziphi ezibandakanyeke ngokupheleleyo kuphando kunye nophuhliso, imveliso kunye neentengiso ezikumgangatho ophezulu webhetri ye-lithium.
I-Shenzhen Lithtech Energy Co., Ltd.is ishishini eliphezulu-tech, elikhethekileyo kwi-R & D, ukuveliswa kunye nokuthengiswa kweemveliso zebhetri zeLithium.
Zeziphi ezibandakanyeke ngokupheleleyo kuphando kunye nophuhliso, imveliso kunye neentengiso ezikumgangatho ophezulu webhetri ye-lithium.
Lithtech TE24100 2kw Lithium Ibhetri phezulu Lithiu ...
Izicelo: Izicelo eziPhezulu ezijikelezayo: 4 × 4 izithuthi Recr ...
Lithtech TE24200 Umjikelo onzulu 24V 200Ah LiFePo4 B ...
Uluhlu lweLithtech Lithium 24V lenzelwe ngokukodwa ukubuyisela ubungakanani obufanayo beLea ...
I-Lithtech TE12200 Umjikelo oNzulu weLithium Ion 12V 200 ...
Ikaliwe iVoltage 12.8V ilinganiselwe amandla ama-200Ah ezeZindlu kwimeko ye-IP56 ABS ...
100ah 48v 5KWH <5000 Imijikelezo yoBomi kwi-80% DoD (Ubunzulu bokukhupha) Kwisikrini ...
Lithtech TE12100C 32650 zezindlu Ibhetri Pac ...
Ezi zigqibelele i-RV, i-van yekampu, i-motor trolling motor okanye i-solar energy s ...
Lithtech TE12300 12.8V 300Ah RV Ibhetri Pack fo ...
Iimpawu ze-Electrica zeVolthi yesiQinisekiso seXesha elingu-12.8V ngokuQinisekiswa kweXabiso le-300AH ...
Lithtech TE2000 48V 50Ah Lithium Ibhetri 6000 T ...
Iimpawu: Ukudityaniswa kwemveliso ethe nkqo kuqinisekisa ngaphezulu kwemijikelo ye-6000 nge-80% ye-DoD Sle ...
Lithtech TE4000 48V 100Ah ESS Ibhetri Amandla St ...
I-Lithtech TE4000 yibhetri ye-lithium yebhetri enzulu engama-48V 100Ah .Your best alternative to buy y ...
Igama lemveliso Umjikelo onzulu we-12v 100ah lifepo4 lithium ion ibhetri ngegama Volta ...
I-Lithtech ikunceda udlale ixesha elide kunye nexesha lokubaleka kwinqwelo yakho yegalufa okanye isithuthi sombane. Ukhuseleko kunye nokungaqhusheki, ukukhanya (kunye nokuncinci) okufaka igalelo kwimayile enye ngentlawulo enye, yomelele ...
Ibhetri yeLithtech ngumjikelo webhetri onzulu ongowona mthombo wamandla kwezi ntsuku .Yiyo eyona izinzileyo ye-lithium, umthombo wamandla ngakumbi.
I-Lithtech ixhasa i-OEM .I-Lithtech lithium ibhetri yinto efanelekileyo, amandla obomi obude. ubomi inkonzo ende kunye nenkqubo yolawulo ibhetri okrelekrele.
Sineqela elihle kakhulu lobugcisa, elinokuthi liyilwe ngokweemfuno zabathengi.
I-Shenzhen Lithtech Energy Co., Ltd.yishishini eliphambili kwezobuchwephesha, elikhethekileyo kwi-R & D, imveliso kunye nentengiso yezixhobo zeLithium ezihlawulelwayo.
Ungazenza njani iZikhululo zaMandla zoGcino lwaMandla zikhuseleke ngakumbi kwaye zithembeke ngakumbi?
01-Kutheni ukugcinwa kwamandla okuphakathi kubeka umngcipheko kwezokhuseleko? Singayichaza ngokwembono yamandla ombane. I-Voltage kunye nekhoyo ngoku zinobubanzi obunye, ombane olula, ukuba akukho kungoku, akukho ngozi, njenge-10KV, imigca ye-voltage ephezulu ye-220KV, sisebenzisa i-insulator kwi-c ...
2021 / Juni / Ngomhla
Uyintoni umahluko phakathi kweeseli zelanga kunye nokugcinwa kwamandla kweebhetri ze-lithium-ion
Ibhetri yelanga luhlobo lwezixhobo zokuvelisa amandla, ezingenakugcina ngokuthe ngqo amandla ombane, ngelixa ibhetri ye-lithium ion luhlobo lwebhetri yokugcina, kwaye inokuqhubeka ngokugcina umbane ukuze isetyenziswe ngabasebenzisi. Xa kuthelekiswa nokugcinwa kwamandla kweebhetri ze-lithium-ion, enye yezinto ezingalunganga kwisol ...
2021 / Juni / ngolwesiBini
Lithium inyathelo lokunyuka kunye nokunyathela
1. Uvavanyo lwebhetri ye-lithium yokunyusa uvavanyo Kuqala, vumela ibhetri ye-lithium yehle iye kwi-3.3V ngokusebenzisa i-chip-down chip, emva koko ibonelele ngombane kwi-microcontroller nakwimodyuli yeBluetooth, kwaye ucwangcise ukuyinyusa iye kwi-7V yokuthwala umthwalo. Isiphumo: Imodyuli yeBluetooth ayisebenzi kwaye ayinakukhangelwa. Susa t ...
Ulwazi lwearhente ehambayo yeebhetri ze-lithium ion
Njengenxalenye ebalulekileyo yebhetri ye-lithium ion, iarhente eqhubayo, nangona ithatha isixa esincinci kwibhetri, ichaphazela kakhulu ukusebenza kwebhetri ye-lithium ion, kwaye inefuthe ekuphuculeni ukusebenza komjikelo webhetri, ukukhula komthamo, ukusebenza komgangatho Njl imp ...
Ilungelo lokushicilela  2020 Shenzhen Lithtech Enegy Co., Ltd.
Ifowuni: + 86-755-23772509
Ifowuni: + 86-15013751033
Buza iBhasikithi ( 0)